Waa maxay abaartu maxayse saameyn ah oo ay soo saartaa? | Saadaasha Shabakadda
Waxbadan baan ka maqalnay abaar, erey in, sida meeraha u kululaado, waxaan badanaa ku isticmaalnaa meelaha roobabku ku yaraanayaan. Laakiin maxay dhab ahaan uga dhigan tahay in gobol cayiman ay la il daran yihiin saameynta abaarta? Waa maxay saameyntani kuwaan maxeyna cawaaqib xumo ku yeelan karaan?
Aynu guda galno arintan inbadan ina wada saamayn karta.
1 Waa maxay abaaruhu?
2 Nooc noocee ah ayaa jira?
3 Waa maxay cawaaqibta ay leedahay?
4 Aaway abaaraha ugu badan?
Waa maxay abaaruhu?
Waa a cimilada cimilada ee ku-meel-gaadhka ah ee biyuhu aysan ku filnayn inay siiyaan baahida dhirta iyo xayawaanka, oo ay ku jiraan aadanaha, oo ku nool meeshan gaarka ah. Waa dhacdo inta badan keenta roob la'aan, taas oo horseedi karta abaar xagga biyaha ah.
Nooc noocee ah ayaa jira?
Waxaa jira saddex nooc, kuwaas oo kala ah:
Abaaraha saadaasha hawada: waxay dhacdaa marka uusan roob da'in - ama roob aad u yar ayaa da'a - waqti cayiman.
Abaaraha beeraha: wuxuu saameeyaa wax soo saarka dalagyada deegaanka. Badanaa waxaa sababa roob la'aan, laakiin sidoo kale waxaa sababi kara waxqabadka beeraha oo aan qorsheysneyn.
Abaaraha haydarooliga: waxay dhacdaa marka keydka biyaha ee la heli karo ay ka hooseeyaan celceliska. Caadi ahaan, waxaa sababa roob la'aanta, laakiin bini'aadamka ayaa sidoo kale inta badan mas'uul ka ah, sida ku dhacday Badda Aral.
Waa maxay cawaaqibta ay leedahay?
Biyuhu waa curiyaha lama huraanka u ah nolosha. Haddii aadan haysan, haddii abaaruhu aad u daran yihiin ama muddo dheer soconayaan, cawaaqibka ayaa noqon kara kuwo dilaa ah. Kuwa ugu caansan waa:
Nafaqo daro iyo fuuqbax.
Waxyeello soo gaadha deegaanka, taas oo si lama filaan ah u saamaysa xayawaanka.
Duufaannada boodhka, markay ku dhacdo aag ay la ildaran tahay xaaluf iyo nabaad guur
Dagaalada dagaal ee salka ku haya kheyraadka dabiiciga.
Aaway abaaraha ugu badan?
Meelaha ay dhibaatadu saameysey asal ahaan waa kuwa Geeska Afrika, laakiin abaaraha ayaa sidoo kale ku dhacay Gobolka Mediterraneanin California, Peruiyo gudaha Queensland (Australia), iyo kuwo kale.
Abaartu, haddaba, waa mid ka mid ah ifafaalaha ugu welwelka badan ee ka dhaca meeraha. Kaliya maaraynta ceel biyood ayaynu iska ilaalin karnaa inay cawaaqib xumo ka dhalato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Waa maxay abaartu maxayse saameyn ah oo ay soo saartaa?
Dayrta xiisaha 2016
Waa maxay meesha ugu diiran meeraha?